Zoma faha-27 mandavantaona – Trinitera Malagasy
Ankasa Galata 3, 7-14/Salamo 110
Tsy ankasa Joely 1, 13-15; 2, 1-2/Salamo 9
Md Lioka 11, 15-26
Ny hazavana dia tsy mandroaka ny haizina fotsiny fa mampiahaka azy mihitsy. Tsy afaka miara-mitoetra ny mazava sy ny maizina. Toy izany koa, ny Teny dia mandresy izay mety ho tsy fahafaha-miteny na ny fibadabadana, izay matetika vokatry ny tsy fahafahana mihaino, ka i Jesoa, ilay Teny tonga nofo no nampiteny ilay azon’ny demony moana. Ny Fanahiny no hampisokatra ny fontsika hihaino ny Teny ary hanokatra ny vavantsika hivavaka ka hiantso an’Andriamanitra hoe Ray.
Manoloana izay mety ho fahagagana, handroahana ny demony anefa dia misy ny tsy mino, misy ny mangataka famantarana. Ho an’i Jesoa, tsy misy fanjakana hiady an-trano, fa na dia ny ratsy aza dia mahay miray hina, manambatra ny hery ka ny fahavalon’ny fahavaloko tonga namako. Ampy koa ny manontany tena hoe amin’ny anaran’iza no anaovan’ny olona hafa ny asam-panafahana ataony, ary tsy azo adinoina na oviana na oviana fa na dia mahery aza Satana, mbola mahery noho Izy ny Mesia, ary ampanantenainy an’i Piera fa tsy haharesy ny finoany ny vavahadin’ny afobe. Matetika ny tahotra ny herin’ny maizina no manosika ny olona maro hititototo hitoky amin’ny sampy, hiantsampy amin’ny ody.
Ny tsy fahaizana mifaly amin’ny asa soa vita (na iza na iza manao azy) dia mety hitenenan-dratsy ny Fanahy Masina, ka hilazana fa asan-demony ny asam-panafahana, ary izany “fahotana tsy hahazoana famelana” izany dia vokatry ny avonavona, izay mitondra amin’ny fitiavan-tena sy ny fialonana ka miafara amin’ny fahafatesana raha tsy hibebahana. Tsy misy afa-tsy ny Fanahy Masina no manana hery hanafaka sy hanondrotra ny olona amin’ny hasina maha-zanaka (Gal 4, 4-7).
Izay tsy momba Ahy dia manohitra Ahy ary izay tsy miara-mamory Amiko dia manahaka. Ary “tsy misy afaka hanompo tompo roa”. Ny fiainantsika araka izany dia mila dinihina mandrakariva, sao tsy mifanaraka amin’izay ataon’i Jesoa, sao tsy fanompoana Azy sy fitadiavana ny voninahiny.
Ambaran’i Lioka amin’ny Evanjely anio koa fa tsy ny fibebahana eo am-boalohany ihany no tokony himasoana fa ny faharetana amin’ny lalam-pibebahana izay hahazoana ny famonjena (Lk 21, 19). Ny fo amam-panahintsika nodiovin’ny Batemy sy hatsarain’ny Sakramenta sy ny Vavaka (Rano sy Menaka ary ny sakafo) dia mila mahatsiaro mandrakariva fa ny demony dia “tahaka ny liona mierona mitady izay harapany” ka mila toherina mafy amin’ny fiorenana amin’ny finoana (1 Piera 5, 8ss). Izay mihevitra ho mijoro dia mila mitandrina mba tsy ho lavo, hoy i Md Paoly (1Kor 10, 12). Mila mangataka amin’ny Ray isika mba tsy ho lavo amin’ny fakam-panahy (Lk 11, 4ss) ary hafahany mandrakariva amin’ny fahefan’ny haizina (Mt 6, 13).
Hahay hiambina mandrakariva anie isika mba ho tempoly onenan’ny Fanahy Masina ka ho famirapiratan’ny voninahitr’Andriamanitra, hampiray sy hamondrona miaraka amin’i Kristy.